Mareykanka oo weerar cirka ah ku dilay maleeshiyo ka tirsan Al-shabaab | Arrimaha Bulshada
Home English News News Mareykanka oo weerar cirka ah ku dilay maleeshiyo ka tirsan Al-shabaab
Mareykanka oo weerar cirka ah ku dilay maleeshiyo ka tirsan Al-shabaab
Bulsha:- Ugu yaraan shan ka mid ah maleeshiyada Al-shahaab ayaa lagu dilay weerar cirka ah oo ciidamada Mareykanku ku qaadeen maleeshiyada Al-shabaab meel u dhow Beer Xaani, sida ay shaacisay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya.
Weerarkan ayaa yimid kadib marki maleeshiyada Al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa Mareykanka.
Ma jirto wax khasaare ah oo howlgalkan kasoo gaaray dadka rayidka ah, sida lagu sheegay warsaxaafadeedka dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa 16-kii bishii hore ee May saxiixay amar boqolaal askari oo Mareykan ah dib ugu celinaya Soomaaliya, si ay uga hortagaan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna soo dhoweeyey go’aanka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ku go’aamiyey inuu dib ugu celiyo Soomaaliya dhowr boqol oo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee tababarka iyo taageerada siiya ciidanka Soomaaliya.